KSplash noma 'Simple' BootSplash yeDebian | Kusuka kuLinux
Akukhona okokuqala ngikutshela ngefayela le- KSplashYebo, ngikwenzile ngaphambili nginezimbili ze- I-ArchLinux (I-KSplash # 1 & I-KSplash # 2), kepha kuzoba okokuqala ukuthi ngikulethele eyodwa Debian 🙂
Kumane nje kwaba ukuguqulwa okulula engikwenzile kufayela le- I-KSplash elula que umc3 usilethe ngaphambili, ngashintsha i-logo kusuka ku- Arch ngalokho kwe Debian, Futhi lo yiwo umphumela:
Ukuyifaka kulula, nazi izinyathelo:
1. Landa ifayela: Landa i-Debian KSplash elula
2. Vula ifayela le- Izintandokazi zesistimu bese ungena Ukubukeka kwendawo yokusebenza.
3. Uma sesifikile lapho, singena kubha yangakwesobunxele lapho sithi “Isikrini se-Annunciator".
4. Sichofoza inkinobho Faka itimu yefayela, iwindi lizovuleka (njenge-Dlulisa amehlo) esizosesha ngalo ifayela esililandile.
5. Siyikhetha kwimenyu bese uchofoza kuyo Faka isicelo.
Ngiyethemba umc3 ungakhathazwa yilokhu hahahahahaha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » KSplash noma 'Simple' BootSplash yeDebian
lokhu kwenzelwa i-KDE kwesokudla?
Yebo, nge-KDE 🙂
Kwenzekeni kuwe ukuthi usebenzisa i-Debian.
Nakulokhu futhi, ngemuva kwe-pacman -Syu in Arch uhlelo aluzange lungilande 🙁
Angazi ukuthi kungani konke ukuvuselelwa kwe-Arch bekungazinzile kamuva nje, angazi noma bekuyi-Arch noma ilaptop yami ... kepha akunjalo, bengizothanda ukuzama iMageia, Fedora, Chakra, kepha angazi ukufinyelela kuma-repos ala ma-distros, ngakho-ke bekuyi-Debian noma i-Ubuntu 🙂
futhi ngenxa yelukuluku .. igatsha ukhomba ku-debian futhi iyiphi inguqulo ye-KDE oyifakile?
Ukuhlola (i-Wheezy) yilokho engikusebenzisayo, nge-KDE 4.6.5, i-LibreOffice 3.4.5 ne-VLC 2.0 emangalisayo… O_O. Okungizwisa ubuhlungu kakhulu ukuba neRekonq 0.7, Chromium 16 neKDE 4.6.5 T_T
ahh futhi ekugcineni .. uyifakile i-libreoffice 3.5 ne-vlc 2.0 ??
Ngiyakuthola, ngiyakuqonda .. yilokho okungidikibalisa kusuka ku-Debian tetsing 🙁 Sekuephuze kakhulu ukufaka amaphakheji .. Kufanele ngibuyele ku-Ubuntu ngigobolondo le-gnome kuphela ehhovisi lamahhala le-3.5 kanye nasendaweni yokugcina i-vlc 2.0 .
manje uyifake kanjani i-vlc 2.0 ?? Ngabe uthole ukutholakala kwesudo aptl vlc ??
Nginezindawo zokugcina ezifanayo ze-KZKG ^ Gaara futhi bengingenayo i-VLC 2.0. Bekufanele ngigijime:
Okuthile okwenzeke kimi futhi bengingeke ngikwazi ukukuxazulula ngenkathi ngiseDebian ukuthi lapho ngifaka i-kernel 3.2 nokuthile, bengingakwazi ukuzwa umsindo ovela kumahedfoni, kuphela kusuka ezimpondweni ezingemuva (okusho ukuthi, itheku langemuva). Awazi ukuthi kungani lokhu kwenzeke kimi?
Yebo… T_T… Ngidinga i-KDE 4.7 okungenani okwamanje 🙁…
Nge-VLC 2.0 sip, ukufaka ukufaneleka kwe-vlc kwakwanele, akukho okunye.
Uma uthanda iDebian bese uyisebenzisa, uma ufuna ukuthola amaphakheji amasha angekho kuma-repos usengasebenzisa ama-Ubuntu PPAs njalo, noma ulande i-.DEB kuwebhusayithi yohlelo lokusebenza, noma ekugcineni landa i-.TAR .GZ bese uzihlanganisa ngokwakho 🙂
mmm angazi, ngine-3.2 njengamanje nayo yonke into ngaphandle kwezinkinga.
Kuzofanele uvule i-alsamixer esibulalayo bese uhlola imigoqo yomsindo ukuze ubone 🙂
Ngiya ekhaya manje 😀
Kusasa kuzoba ngolunye usuku 🙂
ohh ngabe kukhona okushilo okwangikhuphula umoya: O
Ngakho-ke ama-ubuntu PPAs ngokwesibonelo le "sudo add-apt-repository ppa: libreoffice / ppa" nayo ingafakwa kwi-debian? : OOOO
Angiqiniseki ukuthi umyalo we- "add-apt" uyakusebenzela, empeleni angicabangi kanjalo ... kepha ungangeza ama-PPAs ngokwakho kwimithombo ye-source.
Ngokwenza lokhu, yebo… ungasebenzisa Ubuntu PPAs ku-Debian 😉
kahle sooooo ngiyabonga kakhulu 😉 namhlanje ngifunde izinto ezintsha. Jabulela
hahahaha wamukelekile 😀
I-arch yami yayimbi kabi (njengokuthi lokho kufakwa kwakungaphezu konyaka nohhafu) futhi kwafakwa i-chakra. Futhi akusizi ukuthi izithombe ezizinzile ze-arch ziphume minyaka yonke (ngiyazi ukuthi badonsa izithombe ezingahloliwe cishe nsuku zonke kepha akuqiniseki ukuthi sithini: /)
Sawubona Jamin Samuel uma unentshisekelo yokufaka ubuntu ppa ku-debian, nansi indlela yokukwenza:
Yize kunganconyiwe kakhulu ngenxa yezinhlobo ezahlukahlukene zamaphakeji nokuncika, kepha ekuhlolweni kufanele kusebenze
Diego Ngiyabonga kakhulu! noma iqiniso likhona, anginantshisekelo yokusebenzisa i-debian okwamanje .. Ngisesegobolondo le-ubuntu + gnome futhi ngilijwayele kakhulu igobolondo le-gnome .. ngakho-ke ngiqinisekile ukuthi ngizozama fedora kancane kancane ubone ukuthi kuhamba kanjani kulezo zindawo 😀
Ngiyakuhalalisela, ngiyabona ukuthi usebenzisa i-fedora .. ungangitshela ukuthi ngiyifaka kanjani le phakeji: "msttcorefonts" ku-fedora? .. leli phakethe lifaka amafonti e-microsoft afana ne-arial, verdana, times roman njll.
mmm ... iphakheji "msttcorefonts" lapho ulanda ikunikeza iphakethe le-. kunoma yiliphi ithuluzi lamahhala.
Yebo, ngisebenzisa i-fedora kepha ukuzama nje, kepha iqiniso lingihlabe umxhwele, ikakhulukazi ukuthuthuka kwe-gnome-shell, ikakhulukazi ngendlela "yokunqamula" kumanethiwekhi angenantambo ngakho-ke phakathi kwanamuhla nakusasa kufanele ngishintshe umise ngokuqinisekile ku-fedora bese ufometha idiski lami nge-ubuntu, noma kunjalo uma uzama i-fedora, ungaxazulula noma iyiphi inkinga ku-google, izinkinga eziningi engibe nazo ngizixazulule ku-google.
Awuzange uzame uFuduntu?
Bengiyivivinya cishe izinsuku ezi-2 .. kepha ngenxa yezizathu zokufunda angikwazanga ukuzinikela ekubambeni izandla zami .. into engingakwazi ukuyenza ku-fedora ukufaka i-jdowloader nokuxazulula inkinga nge-aludio ezwa kuphela izimpondo zangemuva ngaphezulu hhayi amahedfoni.
ngaphezulu lapho bangitshele ukuthi ngizame ukuvula i-terminal bese ngifaka lokhu: i-alsamixer futhi ngilungiselele okukhipha umsindo .. kahle lapho ngifaka i-fedora ngizozama ukubona ukuthi kuhamba kanjani.
Engingakwaziyo ukuthi ngabe usungakwazi ukujabulela i-libreoffice 3.5 e-fedora. Ngiyazi ukuthi lapho umuntu efaka i-fedora kufaka nehhovisi lamahhala, engingazi ukuthi uma kamuva eyibuyekeza ibe ngu-3.5
Ngivuselele uhlelo lwami futhi inguqulo ye-libreoffice enginayo ingu-3.4.5
Kuphela uma une-dvd, i-fedora ifaka i-libreoffice ngokuzenzakalela, uma une-livecd kuphela lapho kuzofanele uyifake kusuka ezinqolobaneni, kepha iyafana ngoba leyo yinguqulo ekunika yona ngemuva kokubuyekeza 😛
ngicabanga ukuthi lapho i-fedora 17 iphuma lapho bazobe sebevele basebenzisa i-3.5
Ngiyabonga bhuti. kahle anginaso isiqiniseko okwamanje, kepha njalo lapho ngihlala phansi ukuze ngifunde kancane ngokuthi i-Debian / Ubuntu ne-Linux mint isebenza kanjani, ngizizwa ngithanda ukugijimela ku-fedora. Lapho umuntu ebona ukuthi umuntu usebenzisa izinto ezingazinzile ezinjenge-Ubuntu noma i-Linux mint noma igatsha le-sid likaDebian, umuntu uthi: aha bese kuthi umuntu ufanele ukudlula kuphi ngempela? Anginayo impendulo yalowo mbuzo kepha ngizozama i-fedora ukubona ukuthi kuhamba kanjani
Angikwazanga ukufaka i-fucking debian uu
Sasiyini isizathu? I-Debian kulula kakhulu ukuyifaka.
Noma ngubani osenolwazi lokufaka i-debian akunzima .. empeleni kufanele wazi ukuthi ungayifaka kanjani imikhonzo ye-😉
Imfihlo, lapho uzoyifaka, yenze ngaphandle kwemodi yezithombe, ngiqonde ukuthi, kuphela ngesikrini esibi esiluhlaza okwesibhakabhaka, ngiyakuqinisekisa ukuthi ngeke yehluleke
Ngiyabonga kakhulu ngeKSplash njengamanje ngiyifaka kuDebian yami. Futhi kuyiqiniso kakhulu abakushoyo, kungcono kakhulu ukufaka iDebian ekufakweni kochwepheshe
ignome Shell 28 izokhishwa ngoMashi 3.4, izotholakala naku-debian nayo?
Ngiyakungabaza ukuthi TAAAAAAAAAAAANNNNNTTTTTTOOOOOOOO !!!!
ngisho nasegatsheni laseSid ?? : NOMA
Ngabe othile angangitshela ukuthi iqukethe ini nokuthi ungayenza kanjani le nkinga yokuhlanganisa, kusobala ukuthi kuyadingeka kakhulu ukwazi kulo mhlaba we-linux ...
Kwenzenjani, akudingekile kangako
IGaara uma ulanda i-KDE 4.7 noma i-4.8 yokuhlola ungazise ...
Hehehe ngokungabaza okuncane, ingabe kubi kangako ngabo ngenguqulo ye-KDE ukuthi banayo njengamanje ku-Debian Testing?
I-KDE 4.7 ikuSilingo, 4.8 futhi angikutsheli ... Ngicabanga ukuthi abantu beDebian abakatholi okwamanje T_T
ahahaha abampofu abancane !!! .. Kumele senze umkhankaso wokulwa nokuphelelwa yisikhathi kwe-xD futhi sikhuthaze iphrojekthi ukuthi ihlale isesikhathini 😀 (ihlaya)
Yikhompyutha yakho, akuyona i-Arch
Angikhulumi ngecala noma yini ... Ngimane ngithi, ngitshela okwenzeka kimi, yilowo nalowo azenzele iziphetho 🙂
Ngiyakutshela, yilokho kuphela.
Bheka ngaphakathi ukuze ubone
HAHAHAHA alikho ihlaya Ngivula ilaptop yami eyigugu ngombhedo onje ... alikho ihlaya, ngirhaba
Ukuhlola (Wheezy), ngabe kufanele kube nokwakamuva? noma akunjalo? ukuthi nge-debian ngilahlekile
Akunjalo ... qaphela ukuthi isenayo i-KDE 4.6.5, lapho kuphuma izinsuku ezimbalwa ezedlule i-KDE 4.8.1
umbulali kadoti kusho
Sawubona okokuqala ngimusha lapha, ibhulogi enhle kakhulu iyathakazelisa, ah ngiyabonga kakhulu nge-bootplash.
Yebo… T_T… Ngidinga i-KDE 4.7 okungenani okwamanje
Yebo, shintsha ama-repos okuhlola abe yi-sid in worth worth the redundancy, isivele i-kde 4.7.4 izinsuku ezimbalwa, bengifuna nokushintsha ama-repos kepha angisho ukuthi i-sid futhi inginika angazi ukuthi yini , uma-ke ungayifaka nginezifaki ze-nvidia ezifakiwe.
Phendula kumbulali kadoti
Sawubona futhi wamukelekile mngani 🙂
Ngiyabonga ngalokhu okushoyo ngebhulogi, yilokho nje esizama khona ... ukwehluka kancane kokunye, ukungabi ibhulogi / isayithi kuphela kepha umphakathi, umndeni
KuSid sekuvele kungu-4.7.x?
mmm hehe, empeleni manje ngifuna ukuyisebenzisa hehe, ngizolinda kancane ukubona ukuthi ngabe iTesting isanda kungena yini, ngoba iSid ayikhuthazi ukuzethemba okukhulu 😐
Eqinisweni, ngivele ngasuka ngaya eceleni ngoba yonke into ihambe kahle kwaze kwaba yilokho, bengisacabanga futhi uma ngiyihluza kahle, ngiyikitaze kahle, hehe bese kuthi uma ikhona le kde 4.7.x uma uzolinda ukuhlolwa ngiyakubala ukuthi cishe ezinyangeni ezi-4 i-kde 4.7.x izobe ivivinywa, okungenani yilokho engicabanga ukuthi kusukela ezinsukwini ezithathiwe http://pkg-kde.alioth.debian.org/ bese sibonga ukwamukelwa.
Yikuphi ukungalungi igatsha laseSid elinakho? Angazi kangako ngokuthi isebenza kanjani kulelo gatsha ... ukuphela kwento nokuncane engikwaziyo ukuthi eSid amaphakheji amasha namasha aphuma kuqala.
Manje lokho akusho ukuthi ngoba angamaphakeji amasha awazinzile noma uma? - Kusukela ekungazinzini, ukuma kwe-canonical kanjani egatsheni le-Sid, futhi bakwenza kanjani lokho ukuze amaphakheji angalimazi uhlelo?
Ngingathanda ukufunda 🙂
Ngizochaza kafushane kakhulu ukuthi amagatsha akwaDebian asebenza kanjani 🙂
Ake sithi ngingunjiniyela wohlelo lwe-X, ngalwenza ngaluhlongoza ku-Debian ukuthi lufakwe ezindaweni zalo zokuphumula. Bayibeka endaweni yokuphumula yokuhlola, ngemuva kwesikhashana futhi abathuthukisi beDebian babheka ukuthi uhlelo lokusebenza engilwenzile luzinzile kancane (olunezimbungulu ezimbalwa), luya endaweni engazinzile / egatsheni, ngemuva kwesinye isikhathi ngilungisa izimbungulu namaphutha , lapho bebheka ukuthi ayizinzile kancane iya egatsheni le-repos / Sid, ngemuva kwesinye isikhathi yenza okufanayo nokuya ku-Testing ... futhi, uma uNkulunkulu uqobo lwakhe elanda futhi evuma futhi siqinisekisa ukuthi uhlelo lokusebenza I-110% iphelele futhi ayinazimbungulu, bese idluliselwa egatsheni le-repos / Stable
Uyabona ukuthi kungani kuthatha isikhathi eside ukuthi izicelo zingene ku-Testing? 😀
Lokhu kusobala, ngikuchaze kakhulu, kalula nje, empeleni mhlawumbe ngishiye igatsha elithile haha.
Kuyamangalisa .. yonke into iyiphrothokholi: O
i-aja futhi ihlonipheke kanjani-ke ukuma egatsheni leSid laseDebian? ngoba njengoba ungitshela ukuthi amaphakheji egatsheni le-sid awanakho ukuzinza ..
Kwenzekani uma umuntu esegatsheni lokuhlola bese ema egatsheni le-sid? Ngicabanga ukuthi uhlelo lucishe lufane nobuntu, akunjalo?
Okuningi noma ngaphansi .. 😀
Yup ... ngaphezulu noma ngaphansi hehe 🙂
Futhi uma usebenzisa ama-repos wokuhlola, awu, uzongitshela ... hahahaha
I-eksisi isilungile manje ngiyacaca! .. ngamagama ambalwa ngubani osegatsheni le-sid osebenzisa ubuntu, futhi ngubani oku-ubuntu osebenzisa u-debian sid 😀 ahahaha ..
Akufani ncamashi nalokho, kepha hheyi, kusondele kakhulu ... ukusebenzisa Ubuntu okungaphansi noma okuncane kufanele usebenzise iSid ne-Unstable (noma Isilingo mhlawumbe kwezinye izimo).
yini ozama ukungitshela yona, leyodian debian iphephe kakhulu kune-ubuntu? Hewu!
Yebo, kungenzeka ... empeleni u-elav ukutshela umbono wakhe, usebenzise i-Debian ukwedlula mina 🙂
Manje, kufanele ubone ukuthi yini Ubuntu ... isibonelo, Ubuntu Lucid (10.04) ubeyiphakethe leDebian Stable + amanye ama-Testing.
Hahaha uNkulunkulu uqobo hahahaha
I-Debian Sid iphephe kakhulu kune-Ubuntu 11.10 ne-12.04?
Ubuntu futhi buthatha amaphakheji kusuka Kokuhlola. Kepha ngombono ngicabanga kanjalo, ukuthi i-Debian Sid iphephe kakhulu kune-Ubuntu 😛
Ngomqondo, kepha awunasiqiniseko? ngoba uma lokho kuyiqiniso kungenza ngifune ukushintshela ku-debian bese ngisebenzisa igatsha le-sid .. uma kuliqiniso lokhu abangitshela ukuthi i-sid iphephe kakhulu kunokusebenzisa ubuntu.
Uqiniseke kangakanani ngalokhu?
kahle ngivele ngafunda lapho ukuthi egatsheni elingazinzile (Sid) azikho izinqolobane zokuphepha ngoba izimbungulu ezingenzeka zilungiswa ngokuvuselelwa kwephakeji elithintekile.
Lokhu kungaletha miphi imiphumela? - Ngibuyekeza ama-repos aletha ubuntu ngokuzenzakalela ngabona ukuthi okungenani ubuntu bunamaposi abo okuphepha
ukubona lokhu, njalo lapho ngithanda i-arch ngaphezulu, akukhona ukwehlisa isithunzi,
Kepha umsuka wombuzo wami wangaphambilini ngingoba ngangizwile ukuthi ku-debian kuvuselelwe kakhulu kune-arch, ngine-arch ngaphandle kokusebenzisa i-testin, yini engalingana ku-debian?
Yebo, qaphela ukuthi njengomsebenzisi we-debian sid manje, ayinayo isoftware entsha ukuyisho ngendlela, i-debian sid yami ine-kernel 3.2.0-3 kulokho i-fedora ekucabangayo, ine-kernel 3.2.9-2 elinye iphuzu Ukugqamisa i-gdm3 ku-sidian sid yami ine-gdm3 enguqulweni yayo engu-3.0 namanye ama-distros, njenge-fedora ane-gdm3 enguqulweni yayo engu-3.2
UFedora uyi-distro ekhangayo! ... Ngilingeka ukuyizama, kepha uma iphuma isilungile nge-gnome 3.4 😀
ngendlela owenza ngayo egatsheni le-sid?
futhi ushintsha kanjani kusuka ekuhlolweni uye eceleni?
Yebo, ngenza kahle, ngichithe isikhashana ngivivinya kepha njengoba besho ku-debian, qala uzame ukuhlola, ngemuva kokuzethemba, uye eceleni, bese ukuya eceleni akunzima, kufanele uhlele uhlu lwemithombo, bese ulushintsha luye eceleni, ngakho-ke uma wenza ukuvuselelwa, qiniseka ukuthi uzolanda ngaphezu kwe-600mb, impela uma uphatha izindawo ezimbili ezisindayo i-gnome ne-kde hehe.
Ngiyaqonda .. futhi uma wenza lokho, uhlelo lubukeka njengokukhishwa okugoqekayo, ngoba luzobuyekeza kanzima ngaso sonke isikhathi.
Ingabe uqaphele ukuthi i-Kde 4.7 isivele iku-Debian Testing? namuhla ekuseni ungitshele ukuthi une-34 updates, ngibheke futhi kukhona i-kde 4.7
Yebo impela, selivele liyangena. Izolo amaphakheji ahlobene nezilimi ezifakiwe, okunye sekuvele kunamuhla ... great 😀
Kuhle lokho kushicilelwe! = D
ukushicilelwa !! ukushicilelwa !! 😀
kuhle ukuthi sengivele ngifikile, ngakolunye uhlangothi kwi-gnome yami sengivele nginamaphakeji athile enguqulweni yayo engu-3.3.91 futhi ngifuna ukubona ukuthi u-3.4 uphuma nini, futhi othile uyazi ukuthi angahlanganisa kanjani i-iceweasel ku-kde ngithi okungenani akwenze ibukeka kahle njengakwi-fedora, ngendlela enginayo ingqikithi ye-oxygen kde ye-firefox / iceweasel kepha noma ngabe ezinye izinto zibukeka zimbi.
Nginokungabaza, ngingakufaka kanjani lokhu kuguqulwa ku-debian lenny ukwenza umthwalo wayo ukhange ngokwengeziwe
KuLenny unayo i-KDE4?
KUKHULU, kumane KUKHULU ... Sanibonani!
Isixhumanisi sokulanda asikho esimeni.
Ngabe usuvele wabamba iqhaza ku-Ubuntu User Survey?
IFirefox 11 iyatholakala!